Qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray Guddoomiyaha Gobolka Baay - Awdinle Online
Khasaaro usugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo Maanta ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, kaas oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha Magaalada baydhabo.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa Ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo isku qarxiyay Maqaayad lagu Magacaabo Suweys oo ku taal Magaalada Baydhabo xilli uu ku sugnaa Guddoomiyaha Gobolka Baay Cali Wardheere Dooyoow, balse uu ka badbaaday qaraxa.
Wararka la helay ee horudhaca ah ayaa waxaa ay sheegayaan in ku dhawaad 10 Ruux ay ku geeriyoodeen qaraxa in ka badana ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isugu jira qaar kamid ah ilaalada Guddoomiyaha iyo dad Shacab ah.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Galbeed ayaa tegay Maqaaxida uu qaraxa ka dhacay, iyaga oo xiray wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa, iyada oo dadkii ku dhaawacmay qaraxa la geeyay Isbitaalka Wey nee Magaalada Baydhabo.
Previous articleQarax khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho
Next articleAskari ka tirsanaa Nabadsugida Jubbaland oo qarax lagu dilay